Uthathe i-Blog Break! | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 23, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ngibe muhle ngokuzama ukuthunyelwa kwekhwalithi eyi-1 kusayithi lami kulandelwa okuthunyelwe kuzixhumanisi ezihamba phambili nama-athikili enetheni isikhashana manje. Izolo ebusuku ngithathe i- Ukuphuka kwebhulogi. Ngokufanelekile, ukuphumula kwebhulogi kungasho ukuthi ngiye embhedeni futhi ngalala ngenkathi ngifunda. Hhayi kimi.
Izolo ebusuku ngiqhubekile nokwakha i-Google Map yangokwezifiso yesisa sendawo lapha edolobheni. Kungumsebenzi we-freebie omnandi ongasetshenziswa noma ongasetshenziswa - kepha ukuba yingxenye yento enkulu kakhulu kunawe ngaso sonke isikhathi kuyinto enhle. Kungezwe kubantu abasha futhi kwangivezela izimboni ezintsha, njalo ukuhlanganisa.
Ngiphinde ngaba nama-imeyili amnandi abuyela emuva naphambili ngekhwalithi yokuphikisana ngobuningi maqondana nokuphatha umkhiqizo wethu. Lokhu kuhlala kuyingxoxo emnandi, ubungozi bokungalethi lutho noma ukuletha okuthile okungenzeka ukuthi akulungile. Ucingo olunzima. Ngizothemba umuzwa wabathuthukisi bethu futhi ngibone ukuthi imuphi umlingo abangawuthola.
Ngizobekwa icala ngakho, ngakho-ke kungukuzibekela lapho. Abantu bavame ukukumangaza lapho ubanika amandla, noma kunjalo. Leyo yinto engiyishumayelayo, ngakho-ke kungcono ngiphile ngamazwi ami!
Angikaze ngibe ne-blogger yezivakashi lapha kodwa ngingajabula ukwabelana ngokukhanya. Ngilahle ngiphawule noma ngithinte uma unentshisekelo. Awudingi ukuba ne-blog empeleni. Eqinisweni, ngithanda kakhulu ukuba nomuntu ongabhulogi ajoyine ingxoxo. Mhlawumbe 'uzobamba isinambuzane'.
Kuma-blogger engikanye nawo, ingabe ukuba ne-blogger yezivakashi kubanga umsebenzi omningi noma omncane? Ufuna ukwazi nje.
Ukukhishwa Kwencwadi! URenée Pawlish: AmaNefili, uGenesise Wobubi
Mar 23, 2007 ku-1: 28 PM
Ukubhuloga kwezivakashi kusasebenza. Into ukuthi awunamathuba okuthola ulwazi lwe-blogger njengoba unjalo - imvamisa ama-blogger amasha afuna ukumema ibhulogi. Kunokuxhumana okuningi ukubhekana nakho.
Mar 24, 2007 ku-9: 55 PM
Uma benginganikezwa isihloko engingachaza kabanzi kuso, ngingajabula ukuba yisimenywa sakho. Lokho kokuhlangenwe nakho okuningi engingakaze ngibhekane nakho okwamanje, futhi uma ngikwenza kuphile kuzoba yinto enhle kakhulu.
Ngo-Apr 3, i-2007 ku-12: i-27 PM
Lapho sengakha ithrafikhi ngizozama ukufaka ama-blogger ezivakashi. Kubukeka sengathi kuzoba ngumsebenzi owengeziwe kepha ama-blogger womabili angahlomula ngokubambisana. Kuyinto engicabanga ukuthi ama-blogger amaningi kufanele ayenze